Afaan Oromoo is an official language in Ethiopian prisons
Wayyaaneen ilmaan Oromoo nagahaa manneen barnootaa, bakka hojii fi iddoolee gara garaatii dharaan yakkitee hidhaa, dararaa fi ajjeesaa turuu fi jiraachuun ni beekama. Ilmaan Oromoo daandii, mana isaanitii fi bakka hojiitii Agaa’aazii fi hidhattoota sirnichaatin butamanii hidhaman kunneen akka kuma dhibbootan lakkaawwamanis gabaafamaa ture. Gabaafamaas jira. Kanneen ajjeefamanii fi bakka buuteen isaanii dhabames akkasuma manni yoo lakkaawee fixe malee hanga hin qaban. Ilmaan Oromoo yakka tokko malee karaa,manaa fi bakka hojiitii akkaanfamanii guuramaa turanii fi jiran kunneen ammoo akka seerri sirnichaa fakkeessiif bahe sun jedhuttilleen seeratti hin dhihaanne. Hundi isaanituu mooraa leenjii waraanaatti guuraman.
Mooraalee leenjii waraanaa Xolaayi, Sanqallee, Huursoo fi kKF keessatti dararamaa turan,jiranis.
Dhugaan waggoota 25n darbaniif keessumaa waggaa 2n darbanii as Impaayeera Itiyoophiyaa keessatti muldhachaa jiru kan biraa,kan Wayyaaneen hololaa jirtu ammoo kan biraati. Akkuma Ra’een gamana forguggeen gamas jedhamu san kan ummattoonni biyyattii keessumaa ummanni Oromoo itti jiruu fi Wayyaaneen hololtu wal –faallaa dha.
Dhugaan lafarra jiru kan biraa yoo ta’u kan wayyaaneen odeessitu ammoo karaa dhugaa kana haguuga jettee yaaddeen oduu biraati.
Wayyaaneen garuu kana dhoksuuf sobaa, holola fakkeessii hololaa oolti, dhugaa dhoksitee akka waan nagaa fi tasgabbiin jiruutti odeeffachuuf yaalti. Dhugaan garuu dhokachuu hin dandeenye.
Keessumaa erga qabsoon ummata Oromoo FXG finiinee itti fufee asii haalli biyya kana keessa jiru, sadarkaan Wayyaaneen itti jirtu hundeerraa jijjiramaa jira. Waggoonni 2n darban ammoo kan addaati.
Barroonni 2n as aanan baroota qabsoon Oromoo impaayeera Itiyoophiyaa bira darbee gutummaa addunyaatti ifee muldhatee dha. Bara dhugaan Oromoo eenyufuu ifa itti ta’ee dha. Gaafiin Oromoo gaafii haqaa, gaafii sirrii fi gaafii deebii atattamaa argachuu qabu ta’uunis bara caalaatti itti mirkanaayee dha. walumaa galatti waggoonni lamaan as qabsoon Oromoo, FXG bara Faashistummaa Wayyaanee addunyaaf itti saaxilee dha. Wayyaaneen hara’a qabsoo Oromootin dhiphattee, baaragaa jirti.
namaa, qabeenya saba biraa, barbaadee ykn biyyaa fi daangaa saboota biraa weeraruufii miti. Mirga saba biraa dhiibuun aadaa isaas miti.
Oromoon saba dhugaa, nagaa, bilisummaa jaalatuu dha, saba yoo ollaan nagaa hin qabne mana ykn qayee kiyyas nagaan hin jiru jedhee amanuu dha. Nagaafis iddoo olaanaa kennuudha. Oromoon ummata mirga namaaf iddoo ulfaataa qabuu dha. Kanarraa ka’uun Oromoon haqa isaa, mirga abbaa biyyummaa isaaf falamachaa ture, falamachaas jira malee akka Wayyaaneen jettu ummata gooleessaa miti. Dhugaa Oromoon qabsaawuuf kanammoo saboonni olla isaa jiranis ta’ee biyyoonni olla Impaayeera Itiyoophiyaa jiran martuu ni beeku. Kanarraa ka’uun wayyaaneen maaliyyuu hololtus, dhiibbaa fi dhiittaa kamuu gaggeesitus qabsoon Oromoo roga kamiinuu qabsoo haqaa, qabsoo mirga ofii ofiin murteeffachuu waan ta’eef xumurri isaa milkiidha. Fakkeenyummaan isaas saboota cunqursaa sirna Wayyaanee jala jiran maraafuu akkuma ta’aa jiru bilisummaan isaas bilisummaa saboota ollaa isaa jiranii akka ta’u shakkiin hin jiru.
FXG ummanni Oromoo gaggeessaa turee fi jiru ummata Sidaamaaf, Koonsoof, Amaaraa fi saboota biroofillee fakkeenya guddaa ta’eera.
Saboonni kun caalaatti akka Wayyaanee irratti gaafii mirgaa, fincila gaggeessan taasiseera, onnachiisee jira. Kana birattis qabsoon hidhannoo ummanni Oromoo dhugaa isaa deeffachuuf karaa dhaaba isaa ABOn finiinsaa jiru akkasuma qabsoo haqaa ta’uu kan hubatan dhaaboleen bilisummaa saboota akka Sidaamaa, Ogaadeen, Beeniishaangul Gumz, fi Gaambeellaaf qabsaawan kunoo tumsa qabsoo ABO waliin ijaarratanii qabsoo hidhannoo finiinsaa jiru. kun injifannoo dha.
Oromoon kalees har’as qabsoo bilisummaarra jira, qabsoon isaa ammoo akkuma muldhachaa jiru firii naqachaa, daran finiinaa diina raasaa jira. Amma bilisa bahuttis qabsoo roga maraa gaggeessurraa dubatti waan jedhuu miti. Humni duubatti isa deebisuus hin jiru. hololli , hidhaa, ajjeechaan Wayyaanees kana hin dhaabu.
Wayyaaneen namoota nagahaa kumoota hedduun lakkaawwaman kan karaarraa hartee mooraa leenjii waraana ishiitti naqxee hiitee
TV fi Raadiyoo ishii hololaa turte. Baayyee nama raja! Calqaba jarri kun maal leenji’an waraana ta’an moo maali..? kan mooraa leenjii waraanaatti leenji’u waraana waan ta’eef. Inni biraan gaafiin ijoon Wayyaaneen asiin dura hidhe jettee kan himaa turte nama kuma 11 hin caalu. Ammammoo kan leenjisee gadi dhiise jettee karaa TV ishii nutti argisiisaa jirtu yoo xiqqaate marsaa 3n yoo namni kuma 30 ol ta’u tiishartii ykn qomee ayyidagamiim jedhu uffatee gadi dhiifamuu dha.
Gaafii asirratti ka’uu qabukaa namni kumni 11 qofatu hidhame jedhamee sobamaa bahee, kumni 35 ol eessaa dhufeet hiikame kan jedhuudha? Essaa dhufe namni kumni 20 ol gaafa gadi dhiisii itti dabalame? Isa kanaaf Wayyaaneen deebii hin kenniine. Kennuus hin barbaaddu.? Nus irraa hin eegnu maaliif jennaan wayyaaneen sobduudha.
Deebiin isaa dhugaan jiru Wayyaaneen namoota kuma 11tti hiiqanan qabee hidhe jettee haa haaltu ykn haa kijibdu malee durumaa akkuma miidiyaaleen adda addaa fi dhaabonni mirgoota namoomaaf falaman himaa turan kan Wayyaaneen ajjeefaman kumootaan lakkaawwamu. Kan karaa fi bakka hojiitii yakka malee haramanii kaampii waraanaatti dararamaa jiran kuma dhibbaa oli. Isaan keessaa kan murtaaye gadi dhiisaa jirti. Ammalleen kan hin hiikamin ilmaan Oromoo kumoota hedduun lakkaawwamu. Dhugaa kan kanneen ijaan argan ragaa bahaa jiru.
Kanarraa ka’uun kan Wayyaaneen barsiisee Ayyidaggamiim jedhan jettee argisiistu hololaafi. Kan hundaawuu hiikee jira jettee humnaan tiishartii ykn qomee itti uuwwuftee nutti argisiisaa jirtus dubbii dharaati. hololii fi sobni akkanaa ammoo murni tun ammam akka murna sobaan guutamte muldhisuu malee hiikoo biraa hin qabu. Maaliif jennaan ummanni Oromoos ta’e saboonni biroon sichi qasbootti jiru malee akka Wayyaaneen odeesitu kanatti Ayyidaggamiim ykn itti hin deebinuurra hin jiran. Warri tiishartiin sobaa kun humnaan itti uwwufamees kanuma dhugoomsaa jiru.
Gaafiin ummanni Oromoos ta’e saboonni biroon gaafachaa turanii fi jiran maaltu furame?, Wayyaaneen maal gaafatmeet maal deebii kenniteet? Namni mirga isaaf qabsaawu Ayydaggamim jedha? Kan ummanni Oromoo gaafatee fi gaafataa jiru hiree ofii ofiin murteeffachuu dha, deebiin Wayyaanee ammoo dhukaasanii ajjeesuu, hidhanii dararuu fi saamuuu ture, ammas isumatu itti fufaa jira. Haala kana keessaatti
itti hideebinu jedha? Kun oduu fakkaatuu miti. Hin jennees hin jedhus. Wayyaaneen of sobaa jirti.
Oromoos ta’ee saboonni biroo saamamaa, ajjeefamaa, hidhamaa fi dararamaa akksumas biyyaa godaansifamaa itti hin deebinu, fincila dhiifne gabrummaa tole jennee fudhanne hin jedhan, jedhaniis hin beekan, Amma gabroonfataan akka Wayyaanee jiruttis qabsoon itti fufa.
Kan ta’aa jiruu fi muldhachaa jirus kanuma. Kanaafuu hololli Wayyaanee holola fudhatamaa hin qabneedha. Holola fakkeessiti. Dhugaa kana hubachuudhaan iddoo jirutti qabsoo keenya, FXG haa jabeessinu.
Diinarraa Of ittisuun, saba ofii ittisuun kennaa uumamaati! dirqama lammuumaatisi
Baarentuu Gada a Irraa